Britain oo Midowga Yurub ka Baxeysa 29-ka March | Saxil News Network
Britain oo Midowga Yurub ka Baxeysa 29-ka March
London(saxilnews.com)Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday in 29-ka March ay noqon doonta maalinta muddada la sugayey oo ay adeegsan doonto qodobka Article 50 ee axdiga Midowga Yurub ee Lisbon, si ay u billowdo ka bixitaanka ururkaas oo qaadan doonta laba sano.
Ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa wacad ku martay inay raadin doonto heshiisyada ugu wnaaagsan dadka British-ka ah oo bishii June ee sanadkii tagey u codeeyey inay ka baxaan Midowga Yurub.
Waxa ay sheegtay in dadka Britain aysan u codeyn oo kaliya inay ka baxaan Midowga Yurub, balse ay u codeeyeen isbeddel keeni kara I dalka uu noqdo mid u shaqeeyaa dadka oo dhan ee aan ku koobneyn dadka tirada yar ee hantida leh.
Wadaxaajoodyada ay Britain uga baxeyso Midowga Yurub ayaa billaaban doona horaanta bisha May.
Ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub ayaase saameyn ku yeelan kara midowga Britain, ayada oo hogaamiyayaasha Scotland ay isku raaceen inay maanta billaabaan dood ku saabsan inay qaadaan afti ay uga madax banaanayaan Britain.
Si kastaba, Theresa May waxay sheegtay in hadda aan la joogin waqtigii afti labaad la qaadi lahaa, kadib markii Scotland ay ku guul-derreysatay afti la qaaday sanadii 2014, markaasi oo shacabka ay ku diideen inay ka baxaan Britain.